Wararka Maanta: Axad, Dec 8 , 2013-Warbixin ku saabsan kulan lagu soo Nooleynayay Suugaanta Soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay Gobolka Minnesota (SAWIRRO)
Macallin Siciid Saalax oo ah bare ka tirsan Jaamacadda University of Minnesota ayaa 50-kii sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa hal abuure suugaaneed, qoraa iyo bare luuqadda Soomaaliga ah.
“Noloshu waa socdaal, laga soo billaabo inta qofku uu ku jiro uurka hooyadiis ilaa inta uu dhaminayo, waqtiga intaas u dhexeeyana hadba meel ayaad joogtaa, sidaa daraadeed ayaan aniguna qeyb uga ahay sil-siladaas socdaalka” ayuu yiri Macallin Saalax
“Macallinku wuxuu fahmi karaa wax badan oo ardayga ku saabsan, waayo marxalad kasta waxay leedahay dhaqan gooni ah, badbaadinta Hiddaha, dhaqanka, afka iyo suugaantuna waa masuuliyad na wada saran” ayuu sii daba dhigay Siciid Saalax.
Zuhur Xasan Axmed oo ka mid aheyd dadkii soo qaban-qaabiyay Munaasabadan ayaa sheegtay inay mar kasta muhiim tahay in la sharfo dadka taariikhda iyo wax galka ah ee Soomaaliyeed.
“Maadaama aan 5-tii sano ee la soo dhaafay aan soo qaban-qaabineynay xuska suugaanta iyo maansooyinka waxaan sanadkan go’aan ku gaarnay inaan ku sharafno macallin Siciid Saalax Axmed, waayo waa muwaadin baal dahab ah uga jira fanka, suugaanta iyo bahda waxbarashada gaar ahaan nooleynta iyo ilaalinta afka Soomaaliga” ayay tiri Zuhuur.
Xafladdan oo lagu soo bandhigay heesihii, suugaantii iyo riwaadihii uu sameeyay Macallin Siciid waxay sidoo kale soo jiidatay dadkii Ajinabiga ahaa ee soo qeybgalay casha sharafta, maadaama la turjumayay inta badan gabayada iyo heesaha, waxaana ka mid ahaa, suugaantiisa; socdaal iyo geedisocod, Sabigii aan weli dhalan, Umuliso, aqoon, biyo iyo goobiyo shangees
Waxaa kale oo munaasabadan ka hadlay Cabdi Suleybaan, Axmed Cismaaciil Yuusuf, Deeqo Ismaaciil Cali Boss iyo C/raxmaan Ciise Kaahin.
Ugu dambeyntii Macallin Siciid Saalax ayaa la gudoonsiiyay abaal marin uu ku muteysay halgankiisii dheeraa ee dhinacayada badnaa oo faa;iida u lahaa dadka Soomaaliyeed.
Faarax Blue, Hiiraan Online